Gurukota Vanovimbisa Kuwedzera Kwakasimba Mentorship uye Tarisiro yeVaShannon Vakapedza Kudzidza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Gurukota Vanovimbisa Kuwedzera Kwakasimba Mentorship uye Tarisiro yeVaShannon Vakapedza Kudzidza
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • dzidzo • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Kuve nechokwadi cheChirongwa cheKugamuchira Vaenzi chinozadzisa Zvinangwa zvaro
Gurukota rezvekune dzimwe nyika nekushanyirwa kwenyika Sylvestre Radegonde vavimbisa komiti yeMentorship yakavimbika kuperekedza vakapedza kudzidza kuShannon College kuti vaone kuti chirongwa chekugamuchira vaenzi chinozadzisa chinangwa chayo chevechidiki veSeychellois vane zvigaro zvehutongi nehutungamiriri munzvimbo dzekushanya muSeychelles, atadza kuita.
Chiziviso ichi chakaitwa pamusangano neboka rechipiri revakapedza kudzidza makumi maviri nevashanu Shannon wakaitirwa paBotanical House nemusi weChina Mbudzi 25, kuti vanzwe vega kuti sei vasingasviki makumi mashanu muzana evakapedza kudzidza pachirongwa ichi vachiri muindasitiri yekugamuchira vaenzi kana indasitiri yekushanya uye. vashoma vevasara vari kubata zvigaro zvehutungamiriri. Vachitaura kuti nepo Seychelles senyika isingarasikirwe kana munhu apedza kudzidza achisiya chikamu chekugamuchira vaenzi kuti ashande mune imwe, Minister vakati ichi hachisi icho chinangwa chechirongwa icho chine njodzi yekusasangana.
90 Seychellois vakapedza kudzidza kusvika parizvino kubva kuchirongwa chemakore mana chekugamuchira vaenzi icho chinosanganisira makore matatu pachikoro. Seychelles Tourism Academy uye gore rekupedzisira paShannon College kuIreland kubvira apo vadzidzi vekutanga vakapinda chikoro cheIrish muna 2012. Minister vakataura chishuvo chavo chekunzwa kubva kune vakapedza zvidzidzo zvavakasangana nazvo pabasa, matambudziko avaisangana nawo, zvakavaodza mwoyo uye zvakavamanikidza kusiya. indasitiri pamwe nekunzwa mazano avo emhinduro dzinobvira kudzosera mamiriro ezvinhu aya.
Vakapedza kudzidza vakaratidza kushomeka kwemikana yebudiriro uye kutariswa kwezvirongwa zvekudzidzisa, kusarongeka kana kusavapo kwese-pane-imwe sesesheni nevatariri uye manejimendi kuti vatarise mafambiro uye kuona zvinodiwa zvekuvandudza pamwe nekushaikwa kwekubatanidzwa kwevanopa mazano uye Ministry of Employment. . Kune avo vachiri muindasitiri iyi, vazhinji vari neHilton properties, kambani yakamira zvakanaka nekutevera zvirongwa zvekudzidzisa manejimendi.
Vakapedza kudzidza vakagovana kupfuudzwa vachifarira vashandi vekune dzimwe nyika apo mikana yekusimudzira yakauya, yevatariri veSeychellois vachivaona sekutyisidzira kufambira mberi kwavo, vachiri padanho rekupinda mushure memakore ebasa. Vamwe vakataura nezvekusave nehurongwa hwekudzidzisa, kunyimwa mikana yekuvandudza uye kusagadzirirwa manejimendi, kuvamanikidza kuti vasiye uye kushanda mune mamwe matunhu anosanganisira hove, inishuwarenzi, uye kuchengetedza kwevatengi, pakati pezvimwe, zvisinei nerudo rwavo indasitiri.
Vamwewo vari kuita ma internship akawedzerwa uye kudzidziswa manejimendi kwakadzama kwakaunzwa pavari nemhuri dzavo ne ANHRD kudzokera kuSeychelles pakarepo vozosiiwa vachiita zvavanoda vasina basa pakudzoka kwavo.
Vashoma vakapedza kudzidza vakatsanangura nyaya dzebudiriro, vachikurudzira vamwe kuti hazvina kukwana kusimuka, asi kuzvipira uye kutarisisa uye kudada nebasa ravo, kusimudzira hunhu hwaShannon kuitira kuti uve nebasa rinopa mubairo muindasitiri iyi.
Mushure mekunzwa nhoroondo dzevakapedza kudzidza, Gurukota rakarumbidza vakapedza kudzidza nezvavakaita uye akataura kuti kosi yemakore mana yekudzidziswa yaive yakadzama vasati vagovana hurongwa hwavo hweramangwana kuti vaone kuti chirongwa chasvika pazvinangwa zvacho zvekuva nechikamu chepamusoro cheSeychellois. munzvimbo dzekutungamirira.
Kuti aite izvi, mushumiri akataura kuti achange achigadzira komiti yekudzidzisa inovimbika, iyo yaizoziviswa mushure mekusangana neboka rechitatu uye rekupedzisira revaShannon vakapedza kudzidza. “Tinoda kusandura zvizere mashandiro anoita zvirongwa zvekupa mazano, kudzidzisa nekutarisira mumahotera,” vakadaro Minister Radegonde. “Hatisi kuti vamwe vanachipangamazano havasi kurevesa, zvisinei, vazhinji vari kuzvitarisira ivo pachavo. Vanogona kunge vaine vanhu vavo vavanoshuvira kubata zvinzvimbo izvi kana huzivi hwekambani yavo hungangoda kuti zvinzvimbo zvemaneja zviitwe nemunhu wekune dzimwe nyika. Saka isu tinofanirwa kushandura izvi kuti tiise vanhu mukomiti iyi vanozonyatso shanda newe nevamwe vako kuti uve nechokwadi chekuti wawana mazinga akatemerwa ehunyanzvi. Iwe haugone kushandura zvibodzwa paunenge uchifamba. Tichava nehurongwa hwakajeka hwekudzidzisa, zvirongwa zvekutsiva, uye kugadza vanhu kuti vaone kuti izvi zvinotariswa uye zvinoitwa. Isu tichaongorora basa rekomiti iyi uye zviri kuitika mukugadzwa kwauri kushanda mairi kuona kuti vanogara vakatendeseka kuzvisungo zvavo. A one-on-one progress meeting kamwe pamwedzi ndiwo mashoma. Tichange tichiita mumwe musangano zvakare nevakapedza kudzidza uye tichange tichizivisa nezveboka reMentorship Committee uye hurongwa hwedu,” vakadaro.
Vachikurudzira vakapedza kudzidza kuti vatsungirire, Minister Radegonde vakati, “Ndinoda kukukurudzirai, kukuudzai kuti musakanda mapfumo pasi. Avo vakaenda, vakandoshanda muchikamu chavanenge vachifara, vamwe vakatanga mabhizimisi avo kana kutora zvimwe zvidzidzo, Good Luck. Unofanira kufara kuita zvaunoda kuita. Asi kunemi muri kufunga kuenda ndinoda kukuudzai kuti musakanda mapfumo pasi izvozvi, rambai henyu, tichagadzirisa zvinhu.” Vachivimbisa mutemo wekuvhura gonhi nebazi reTourism, vakasimbisa kuti bazi rezvekushanya rinoramba rakavhurika mazano kubva kune vakapedza kudzidza. "Ndakasununguka kuuya kwatiri zvakare panyaya dzekuti tingabatsira," Minister vakadaro.
Achitenda vakapedza kudzidza nekupa nguva yavo kumusangano, Munyori Mukuru Wezvekushanyirwa kwenyika Sherin Francis akavarumbidza nokuda kwekubudirira kwavakaita mukupedza kosi yemakore mana yaidiwa zvikuru uye nokuda kwemaonero ari pakati nepakati avakanga vataura. “Tanga tichida kuti maonero ako nemazano ako atangezve chirongwa ichi uye auye nechirevo chechokwadi chezwi rekudzidzisa kwachiri. Tinofanira kuziva makwanza, simba, uye utera. Pachave paine kudiwa kwevatorwa muzvinzvimbo zvemaneja - zvisinei, panofanirwa kunge paine chikamu chepamusoro chenyu muzvinzvimbo zvemaneja, "PS Francis vakapedzisa.
Hapana vakapona mutsaona yeAn-12 muRussia...